ရုံးတွင်းအင်္ဂလိပ်စကား (၃) - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on December 9, 2013 at 14:51 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
မိမိအလုပ်များနေသည့်အခါ၊ မိမိကိုအထက်လူကြီးကခိုင်းသည့်အခါ ဘယ်အချိန်အပြီးလုပ်ပေးရမည်၊ မိမိမှ လုပ်ပေးနိုင်၊ မလုပ်ပေးနိုင် စသည်တို့ကိုအလုပ်ခွင်အတွင်းမလွဲမသွေပြောဖို့ကြုံကြမှာပါ။ အောက်ပါဝါကျများကိုလေ့လာလေ့ကျင့်ထားလျှင် အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် လူနဲ့အချိန်ကိုကြည့်ပြီးပြောသင့်မပြောသင့်ကတော့မိမိဘာသာချိန်ဆရမှာဖြစ်ပါတယ်။
"I'm busy with work."
"Can I do this later?"
"Does this have to be done now?"
"When do you need this by?"
"When is the deadline?"
"I'm not going to have time for any other assignment until Thursday."
"I'll try to free up my schedule."
"I'm pretty sure I can meet the deadline."
"If I don't get any help on this, I won't be able to complete it on time."
"I'll do whatever I can to make sure this is done on time."
ကျွန်တော့်အပေါ် စိတ်ချနိုင်ပါတယ်။ (အားထားနိုင်ပါတယ်)
ဆရာ့ကို မျက်နှာအပျက်ခံရစေ ဖူးလို့လား။
စီးပွားရေးသမားချင်းတွေ့သည်ဖြစ်စေ၊ မိမိကုမ္ပဏီကိုယ်စားပြု၍သူစိမ်းတို့နှင့်တွေ့သည်ဖြစ်စေ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် လိပ်စာကတ်ပြားလေးများ အပြန်အလှန်ပေးကြရတာထုံးစံပါ။ ယခုခေတ်တွင် အီးမေးလ်လိပ်စာပါလိုအပ်လာတော့ တောင်းပုံတောင်းနည်း၊ ဖြေပုံဖြေနည်းတွေကိုသိထားရပါမယ်။ လိပ်စာကတ်ကို business card အပြင် visiting card, calling card, call card ဟုလည်းခေါ်ကြပါသေးတယ်။
"Could I have one of your business cards?"
"Can I have your business card?"
အဆိုပါအမေးများကိုလွယ်လွယ်ကူကူ 'sure' သို့မဟုတ် 'no problem' ဟုပြန်ဖြေနိုင်ပါသည်။
"Can I get your phone number or email address?"
ခင်ဗျား ဖုန်းနံပါတ် ဒါမှမဟုတ် အီးမေးလိပ်စာ ရနိုင်မလား။
"What is the best way to contact you?"
"Can I get your contact information?"
"My contact information is on my business card. Let me give you one."
ကျွန်တော့်လိပ်စာကတ်မှာ ကျွန်တော့်ကိုဆက်သွယ်လို့ရမယ့်နေရာပါပါတယ်။ ကျွန်တော်တစ်ခုပေးပါ့မယ်။
"You can reach me by calling the number on my business card."
"My email address is on my business card."
"Can you send it to my email address?" "Can you email it to me?"
"You can send it to me through email."
"Can I email it to you?"
"Can I send you the information through email?"
တစ်ခါတစ်လေမှာ အီးမေးလ်လိပ်စာမှားရိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူပေးတာကမှားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် မိမိပို့လိုက်တဲ့မေးဟာ လက်ခံတဲ့လူမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်း automated email ပြန်ပို့လာတာကြုံဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ တစ်ဖက်သားကို အောက်ပါအတိုင်းအတည်ပြုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
"Can I verify your email address? The address I have on file appears to be incorrect."
ခင်ဗျားအီးမေးလ်လိပ်စာ ပြန်စစ်လို့ရမလား။ ကျွန်တော့်မှာရှိတဲ့လိပ်စာမှားနေတယ်။
"I am unable to email it to you. Can you tell me your email address again?"
ကျွန်တော် ခင်ဗျားဆီအီးမေးလ်ပို့လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ခင်ဗျားလိပ်စာလေးထပ်ပြောနိုင်မလား။
"I am gettingamail saying it is undeliverable. I might have misspelled it. Can I double check your email address?"
အီးမေးလ်မထွက်ဘူးဆိုတာပဲပြနေတယ်။ ကျွန်တော်စာလုံးပေါင်းမှားတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ ခင်ဗျားလိပ်စာ သေချာအောင်ပြန်စစ်လို့ရမလား။
ကဲ ဒါလေးတွေလေ့လာပြီး ယနေ့ပဲမိမိရုံးထဲမှာလေ့ကျင့်ပြောဆိုကြည့်လိုက်ကြပါစို့။
Permalink Reply by Htike Htike Myint Maung on December 9, 2013 at 16:11
သုံးဖို့လိုအပ်နေတဲ့အချိန်သိရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်လဲထပ် share ပေးပါနော်။
Permalink Reply by Zaw Zaw Aung on December 9, 2013 at 17:01
Permalink Reply by UMyo Min on December 9, 2013 at 18:55
Permalink Reply by sansanaye on December 11, 2013 at 18:20
Permalink Reply by Khine Zin Oo on December 21, 2013 at 11:40